Alteryx: Bhizinesi Njere uye Strategic Ongororo | Martech Zone
China, June 14, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Kana vanhu vachitaura nezvazvo analytics, inowanzo ganhurirwa kune saiti, yakajairwa data iyo yakajairika mukati mehuwandu hwevatengesi. Kune makuru masangano ane terabytes e data - kusanganisira data rekutenga kwevatengi, data recensus, geographic data, data rezvenhau rezvevanhu, nezvimwewo - avhareji analytics chikuva hachishande. Heino hurukuro huru pakati paAlteryx naForrester Boris Evelson pamusoro wenyaya:
Alteryx inosanganisa ungwaru hwebhizinesi uye kugona kubatanidza kune makuru madhatabhesi mune izvo zvavanorondedzera se zvine hungwaru analytics.
Vhiki rapfuura, ndakaita hurukuro inonakidza pamusoro wenyaya naPaul Ross, VP weChigadzirwa uye Kushambadzira Kweindasitiri kuAlteryx. Mune yangu yapfuura dhatabhesi yekushambadzira basa, ini ndakagadzira uye ndikagadzira yekushambadzira data matura evatengi uye ndikanzwisisa matambudziko. Dzimwe nguva, zvinotitorera mazuva kuti titore terabyte yedata. Alteryx inobata mabasa akaomarara seichi pane kubhururuka, uchishandisa izvo zvazvino mudhatabhesi matekinoroji
Alteryx inosanganisa ese maficha e data ekuchengetera maturusi uye emazuva ano analytics nemagariro maturusi ekupa maonero akazara e data rako - kusanganisira kuburitsa, shanduko uye mutoro (ETL), data uye hutsanana hwekero, kusangana kwedata kwevatengi, kudzvanywa kwedata uye kunongedza, kurondedzera uye nzvimbo yekuongorora.
Alteryx: Unofanirwa kuongorora dhata rako pamwe chete nezvakakosha zvekunze zvinhu - sekumba, kukwikwidza, psychographics, uye geo-nzvimbo. Zvese zvakabatanidzwa, izvi zvine hungwaru bhizinesi njere analytics kukupa izvo zvaunoda kuti utore mikana yemisika yemisika, kukunda vakwikwidzi vako, uye kutyaira yakawanda mari kubva kubhizimusi rako razvino.
Uye ndipo panokwana Alteryx. Alteryx Strategic Analytics software izere dhizaini-kune-gore mhinduro inosanganisa data rebhizinesi, zvemukati zveindasitiri, uye kugadzirisa nzvimbo kupa varongi vezvirongwa zvese zvavanoda mune imwe, nyore kushandisa mhinduro. Ndiyo yako imwe sosi yekuronga analytics software, data, uye ongororo, izvo zvinounza bhizinesi njere analytics iwe unofanirwa kuita zvisarudzo zvine chivimbo, zvine ruzivo.
Kuongorora kweAd hoc mumaminetsi: Dhizaini uye gadzirisazve zviitiko pane nhunzi.
Anopindirana machati uye mepu: Ziva hukama hutsva nemikana.
Spatial ongororo: Chera zvakadzika uine chaiwo mamiriro enzvimbo.
Yakakura mushumo uye sarudzo dzekuendesa: Ipa nzwisiso nenzira yaunoda.
Zvirongwa zvekuvaka: Gadzira uye ugovana analytic maapplication nedhonza-uye-kudonhedza wizard.
App kuchinjana: Tora jumpstart ine prebuilt maapplication kubva kuAlteryx Nharaunda.
Muchitoro chemazhinji-chiteshi uye yekushambadzira nharaunda, mumwe weAlteryx mutengesi akashandisa Facebook 'Anofarira' kukwidziridza chikamu chavo chevatengi. Ichishandisa Alteryx, kambani iyi yakakwanisa kuenzanisa yega yega 'Senge' pane yayo Facebook peji kune yevatengi zviitiko mune yayo kuvimbika chirongwa, uye kuongorora yevatengi 'maitiro ekutenga. Uchishandisa fungidziro yekufananidzira, nzvimbo (kana nzvimbo) ongororo, uye huwandu hwevanhu, mutengesi akaongorora kudyidzana kwevatengi vepaFacebook uye hukama hwakananga nekutengesa kwepamusoro mune yega yega yezvikamu zvevatengi uye zvigadzirwa zvigadzirwa.
Yakasanganiswa neyemukati mutengi kana yekutengesa data, uye yekunze data rehuwandu Alteryx iri kupa makambani simba kuti vanzwisise chaizvo maitiro avo enhau enhau uye kudyara kuri kukanganisa maitiro evatengi, uye zvakanyanya kukosha, kwavo kwepazasi.
Kana iwe uchida kuyedza zvimwe zveAlteryx maturusi kuburikidza newebhu - tarisa mashoma avo e analytics masvikiro aunogona kushandisa mahara kunze kwavo Alteryx Zvino saiti. Iyo yavo Twitter tracker yakanaka kupora, ichidzosa rondedzero yehukama tweets pane yakatsvaga mazwi akakosha, pamwe neruzivo rweye tweeter. Iwe unogona zvakare kuisa mune kero uye Twitter ID kune imwe yekuwedzera kunongedza!
Tags: alteryxetlgeographic datageotargetingkubikadata renzvimbo